Chartbeat Kudhinda: Chaiyo-Nguva Webhu Ongororo | Martech Zone
Chartbeat Kuburitsa: Chaiyo-Nguva Webhu Ongororo
Chipiri, June 11, 2013 Muvhuro, June 10, 2013 Douglas Karr
Kune masaiti ari kutsikisa kazhinji uye achishandira kuti awane traffic pakarepo kuburikidza neanochinja data, chaiwo-nguva manhamba mapuratifomu senge chartbeat inogona kubatsira kupa iyo njere bhizinesi rako raunoda.
Makomborero Akakosha eChartbeat Vaparidzi anosanganisira
Kuziva iyo nyaya dzinoverengera vaverengi vako nguva yavo uye kutarisisa kwairi kuti iwe ugone kuronga yako kubatanidzwa kukuru kugutsikana.
Kuona chaizvo panotariswa nevateereri vako inodonha, saka unogona kugadzirisa zvemukati wako uye chengeta vaverengi vako papeji rako.
Kuziva mhando dzemukati dzakaratidza kuve dzakakurumbira kuburikidza nesocial media share.
Kuona vhidhiyo nzwisiso inoenda kupfuura yekutanga kutamba inotanga - ona izvo zvemukati zvemavhidhiyo zviri kubata vateereri vako nzeve.
Kuyera Yakabatanidzwa Nguva inobatsira iwe kuteedzera izvo zvirimo zvingangoita kuvaka vateereri vanodzoka.
chartbeat yakavaka suite yezvigadzirwa zvinobatsira zvese zvikwata zvako kuti zvinzwisise kuti vateereri vako vanowana sei zvese zvemukati. Zvikwata zvako zvinogona kuseta, kugovana, uye kuyera zvinangwa, uchishandisa iwo akafanana mhando-yakavakirwa metric.
Tags: Analyticschartbeatchartbeat analyticschaiyo-nguva statsmagariro stats